IBB နိုင်ငံတော်သမ္မတİmamoğlu5Walking ရပ်ကွက်ခဲ့သည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[22 / 08 / 2019] Anadolu Isuzu ကား, ထိုပြိုင်ပွဲများတွင်ယှဉ်ပြိုင်ပါလိမ့်မယ် transanatoli	41 Kocaeli
[22 / 08 / 2019] မြန်နှုန်းကျည်ဆန်ရထားကိုဖွင့်တံခါးပေါက်ကင်ပိန်းကို, ဂျပန်အတွက်လေ့	81 ဂျပန်
[22 / 08 / 2019] İETTကနေညဥ့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြေညာချက်များ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[22 / 08 / 2019] Istanbullites, IETT နှင့်မီထရို 24 နာရီလုပ်ငန်းခွင်စေချင်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[22 / 08 / 2019] Expree ကျွန်း Haydarpasa ဘူတာ Kavusan လိမ့်မည်သည့်အခါအပေါ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်IBB သမ္မတİmamoğlu5ရပ်ကွက်လျှောက်လှမ်းခြင်းမျှော်ခဲ့
IBB သမ္မတİmamoğlu5ရပ်ကွက်လျှောက်လှမ်းခြင်းမျှော်ခဲ့
14 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, PHOTOS, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
IMM သမ္မတ imamoglu ခရိုင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluစုစုပေါင်း5ခရိုင်ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းလှမ်းသွား၏။ Yenikapi လုံခြုံရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအထိရှာဖွေနေကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကနေရွှေဦးချို၏ Center က Metro တံတားစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း Aksaray မြေအောက်ဇား၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံ, အချက်များကိုများစွာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ İmamoğluအမှုကိုပြုခံရဖို့တုံ့ပြန်ပလပ်စတစ်ကစားကွင်းသို့ရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံ, "ဒါဟာဖြစ်ပျက်လို့မရပါဘူး။ ဒီပန်းခြံအတွင်းမှာလည်းရှိတယ်, ကြည့်ပါ။ တစ်ဦးမြို့တော်စည်ပင်က Anatolia အတွက်ထားနိုင်, လူတွေyadırgıy။ ထိုကဲ့သို့သောဤနေရာတွင်ချပြီးအဖြစ်ဘာမျှမရှက်စရာအမှုအရာရှိပါသည်။ လုပျသောဤသူဦးစားပေးလျှင်, ငါတို့သည်ရှင်းရှင်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ညာဘက်ဒီမှာ IMM များ၏ရှေ့မှောက်၌။ ဖြစ်ကောင်းအဘယ်သူမျှမပယ်ရှားခဲ့, အချိန်ကြာမြင့်စွာလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအခွင့်အာဏာ, သူကိုကြည့်ရှု '' ငါ့ကိုလှည့်ပတ်သောအရာကိုဘာမ '' ။ လူတွေကိုချက်ချင်းဝနျးကငျြကိုစတင်ခင်မှာ။ သို့သော်ဤကျွန်း, ဒါပေမယ့်ခြေလျင်, feeling မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဝေးလံခေါင်ဖျားမဟုတ်ဘူး "ဟုသူကပြောသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, အချိန်ပို၏တတိယနေ့၌အဘို့ဆောင်သောပွဲ, ဗဟို Sarachane အတွက်တည်ဆောက်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ခဏတစ်İmamoğluအခန်း, ရုံးဝန်ထမ်းများ, Semih အလယ်သားနှင့်သူ၏ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုနှင့်အတူမွန်းတည့်အချိန်၌ IMM အဆောက်အဦထဲကနေကွဲကွာခဲ့သည်။ İmamoğluအဆိုပါ IMM လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Murat Shield ကို, Orhan Demir Murat ပရင်တာနှင့်ရထားစနစ်များဒေါနရွက်Alpkök၏ဌာနမှူးများကလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ İmamoğluသည့်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု, ရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံအတွင်းရှိ Aksaray မှတဆင့်ဆင်းဖို့မစီစဉ်ထားသည်။ "ကျနော်တို့ကဒီတူးဖော်ကွင်းဆင်းဖို့ပွင့်လင်းတစ်ဦးရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်", "ကလူရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံနှင့်စီးနင်းနှစ်ဦးစလုံးသည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရကြောင်းသေချာစေရန်ကို set up İmamoğluကပြောသည်။ ဒါကကျနော်တို့ချက်ချင်းစနစ်တွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့လိုသက်တမ်းတိုး၏ညာဘက်ပေးနေပါသည်။ သငျသညျ, ကမှာကြီးမားဧရိယာကိုကြည့်မလား။ ဒီမှာငန်းငါ့ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကငါကသူတို့ကိုကြည့်ပေးပါလို့ပြောကာကွယ်မှုအောက်တွင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဦးစီးဌာနမှနိုင်ငံတော်သမ္မတ Mahir Bey အကြောင်း, သငျသညျငါ့အရေကြည့်ကြလို့ပြောပါလိမ့်မယ် "ဟုသူကသတိပေးခဲ့သည်။
ဒါဟာဒီလိုမဖွစျနိုငျသညျ "သောသားသမီးတို့သည်သမိုင်းကျွန်းဆွယ်ထိ မိ. လဲအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ပလပ်စတစ်ကစားကွင်းကြောင်းညွှန်ပြİmamoğlu။ ဒီပန်းခြံအတွင်းမှာလည်းရှိတယ်, ကြည့်ပါ။ တစ်ဦးမြို့တော်စည်ပင်က Anatolia အတွက်ထားနိုင်, လူတွေyadırgıy။ ထိုကဲ့သို့သောဤနေရာတွင်ချပြီးအဖြစ်ဘာမျှမရှက်စရာအမှုအရာရှိပါသည်။ horn, သူတို့ကပိုပြီးအသစ်အသစ်အသစ်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုထားတော်မူ၏။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြသည်ခြင်းမပြုမီ။ ရွေးကောက်ပွဲကစားအုပ်စုထားခဲ့ပါတယ်2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်။ ဒီ preference ကိုပြတ်ပြတ်သားသားသူကိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေကြလျှင်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင် IMM ရှေ့မှာ။ ဖြစ်ကောင်းအဘယ်သူမျှမပယ်ရှားခဲ့, အချိန်ကြာမြင့်စွာလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအခွင့်အာဏာ, သူကိုကြည့်ရှု '' ငါ့ကိုလှည့်ပတ်သောအရာကိုဘာမ '' ။ လူတွေကိုချက်ချင်းဝနျးကငျြကိုစတင်ခင်မှာ။ သို့သော်ဤကျွန်း, ဒါပေမယ့်ခြေလျင်, feeling မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဝေးလံခေါင်ဖျားမဟုတ်ဘူး "ဟုသူကပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Diary ON"
လမ်းသွားလမ်းလာလေ့လာတွေ့ရှိချက် Aksaray မြေအောက် Market ကကြီးစိုးရာဝင်းထံမှ Pertevniyal High School တွင်နှင့်တန်ဗလီများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြတ်သန်းအဖြစ်İmamoğlu။ အဆိုပါစျေးဝင်ပေါက်များတွင်သူကိုİmamoğluနိုင်ငံသားများ, IMM ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေကိုယူမှတက်စီတန်း။ ဤအတောအတွင်း Elif Akgülအမည်ရှိရှည်လျားကောက်ကွေ့4နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာစိတ်ဝင်စားဖို့အချိန်လေးမှဦးဆောင်သောİmamoğluဖြစ်ခဲ့သည်။ ပန်းပွင့်အားဖြင့်မြေအောက်ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဈေးရောင်းİmamoğluနှင့်မန်နေဂျာနှင့်အတူတွေ့ဆုံစဉ်ကို လုပ်. , လက်ခုပ်ဩဘာ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Gamal Dadasınlıoğlဘုတ်အဖွဲ့ကိုယ်စားဈေးများ၏ပြဿနာများကိုစာရင်း။ တုန့်ပြန်İmamoğlu, "ကျွန်ုပ်တို့၏ပြက္ခဒိန်ပွင့်လင်း။ သင်တို့နှင့်အတူထိုင်စကားပြောပါလိမ့်မည်ပါလိမ့်မည်ကဘာလဲ "ဟုသူကပြန်ဖြေသည်။ İmamoğluဓာတ်ပုံကိုတောင်းဆိုမှုများ၏ဈေးကွက်ဈေးရောင်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားများခြိုးဖောကျခဲ့သညျ။
İmamoğluနှင့်သူ၏ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို, တဖန်ခြေလျင် Yenipak အဆိုပါ Aksaray မီထရိုဘူတာကနေလွန်။ Metro Inc ကိုပြေးနေ့ bayramlaşmaİmamoğluယင်း၏န်ထမ်း,7months ago ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏, "Center ကစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းYenikapıလုံခြုံရေး" ဟုအဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ Metro အစ္စတန်ဘူလ်မှဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာလီ Firat, İmamoğluဌာနချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေး၏။ İmamoğlu, ဗဟိုမှာဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲကျင်းပခဲ့ကြသည်။ İmamoğlu, အချိန်ပိုရဲ့အစမှာအလုပျသမားရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ရေဒီယိုများပှဲကျင်းပခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းနှင့်အတူအရက်သောက်လက်ဖက်ရည်İmamoğluတူညီထိုင်ခုံ Semih'le ပေါ်မှာထိုင်သူ့သားမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်။ İmamoğlu, ဗဟိုရဲ့န်ထမ်းအားဖြင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်ကူညီရန်ညွှန်ကြားချက် 24 နာရီအခြေခံကိုဖန်ဆင်းအပ်ပေးတော်မူ၏။
ဝန်ထမ်းနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားİmamoğluသုတ်ဓာတ်ပုံကိုသူမYenikapı'danကနေမြေအောက်ရထားစီးသွားခဲ့တယ်။ İmamoğluအဆိုပါ Metro ဖို့ drive ကို၏နောကျဆုံးအပိုငျး, ဗဟိုခရီးသည်ဖို့ကြေငြာချက်၏အဘို့ဆောင်သောပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ İmamoğluရထားအတွက်ခရီးသည်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကို op အဆိုပါ IMM သမ္မတအဘို့အလိုင်းတက်နားလည်နိုင်သည်။ သူ၏ဖခင်နှင့်အတူရပ်နေစီးတဲ့သူ Semih, İmamoğluဦးဇော်လင်းကပုံစံတွင် "သင်တို့သည်ငါ့ကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်" ဟုပြောသည်။ İmamoğluအဘ၏သားမှအဖြေ "Oooo! ကြွက်သားတွေလား? အရိုး? "shaped ခဲ့သည်။ ဖခင်နှင့်သားအကြားကဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရယ်မော bystanders ။ İmamoğluအတွက်မီးရထားဘူတာရုံရွှေဦးချိုမှ, Haliçက Metro တံတားသမိုင်းကျွန်းဆွယ်တခုတခုအပေါ်မှာလေ့လာရေးကုန်းပတ်ကနေလေ့လာသည်။ İmamoğlu, ပထမဦးဆုံးသူတို့ဒေသအဘို့ပြုရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ shared ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်နေဆဲမြေအောက်ရထားİmamoğlu, Şişhaneနည်းမှန်လမ်းမှန်စီး။ , İmamoğluအတော်လေးလူစည်ကားရထားအတွက်နိုင်ငံသားများ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲကျင်းပနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုများများကြသည်။ Semih မိမိအဘ၏နိုင်ငံသားများနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့အ စုပေါင်း. ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဘူတာကနေဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပတ်လည်İmamoğluŞişhaneနိုင်ငံသားများဝိုငျးထားလေ၏။ İmamoğluဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏လမ်းများအတွက်လှည့်လည်နေတဲ့ကာလ, သူဈေးရောင်း၏တိုင်ကြားချက်မှနားထောင်ခဲ့တယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်İmamoğlu, ကျောက်ခေတ် Mahmutbey အဆိုပါ Metro လိုင်းဆောက်လုပ်ရေး Visited 07 / 08 / 2019 IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, ကျောက်ခေတ်ထို့နောက် Tuzla ၌သူ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ချိုင့်ဝှမ်းဒေသများရှိတစ်ဦးအသက်တာသစ်မှလွန်။ "ဒီ Seagull စီမံကိန်း" နှင့်ကျောက်ခေတ် - ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Mahmutbey မက်ထရိုလိုင်းİmamoğluလေ့လာတွေ့ရှိချက်, Kabataşမတိုင်မီ - Üsküdarကူးတို့, ထို့နောက်ကျောက်စာ - Taksim ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာအညီနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် istanbulkart သုံးစွဲဖို့အတွက်ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာစီးနင်းသည့်အခါİmamoğluရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, အသက်ရှင်ခြင်းကိုချိုင့်ဝှမ်းစီမံကိန်းတွင် Tuzla Aydinli ရပ်ကွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ဆိုက်မှာအသက်ရှု Hacet စီးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲ, ခြေ "Seagull စီမံကိန်း" ၏ဖုန်မှုန့်နှင့်အတူကျောက်စာများတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် site ပေါ်တွင်ယူခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖိနပ်, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတှငျတှေ့အကျီနဲ့ခမောက်များ၏တိကျသောအတိုင်းအတာ ...
Kestel Bursa Bursaray နဲ့ခရိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည် 17 / 08 / 2017 အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာခရိုင်တဦးဖြစ်သည့် Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, Kestelli ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အစည်းအဝေးကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားသာချက်များနှင့်အတူ Bursa Kestel နီးပါးလေးပုံတစ်ပုံဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်။ မြို့တော်ဝန် Kestel Yener Acar, အနီးကပ်န်ဆောင်မှုမှအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကိုအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure များ၏ရွာရဲ့စုစုပေါင်းပြန်လာ၏ 28 35 ရပ်ကွက်အတွင်း, အားကစား၏သမိုင်းအမွေအနှစ်အထိအားလုံးန်ဆောင်မှုကိုအပ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, Dobrogea ခရိုင် Kestel လူမှု်ဆောင်မှုများအတွက်ရပ်ရွာသူကြီးများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန် Kestel Yener Acar ကိုလည်း Kestel အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Altepe ဖြင့်န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ဘယ်မှာအချက်အလက်တွေကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည် ...
တရားမျှတသောခရိုင်အသစ်ကတံတားရရှိသွားတဲ့ 15 / 12 / 2014 တရားမျှတသောခရိုင်အသစ်ကတံတားရရှိသွားတဲ့: ကျောက်စာတံတားရပ်ကွက်အတွင်းအပျက်အယွင်းသောကျောက်တံတားနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းတူရိယာဖြတ်သန်းခဲ့ပါဘူးအတွက်တစ်ဦးကို dual လမ်းသွားကွန်ကရစ်တံတားအစားမြှို့နယ်ခြင်းဖြင့်ဖြိုဖျက်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကတံတား၏ဆောက်လုပ်ရေးယခု 1 200 တထောင်သန်းသုံးစွဲခဲ့ပြီးပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါဖွင့်လှစ် Osmangazi မြို့တော်ဝန် Mustafa Dundar မှာစကားပြောသောဤဝန်ဆောင်မှုများ "ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဝန်ဆောင်မှု၏အဆုံးတိုင်အောင်အကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်စတင်နေပြီထားသောအလုပ်ဆက်လက်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Service ကိုဆက်လက်လိုသည်။ ကျနော်တို့သင်ဤတာဝန်အားပေးရမယ့်ချိုးခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ကျနော်တို့စတင်ကြပြီထောက်ခံပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတရားမျှတသောရပ်ကွက်အတွင်းTaşköprüမှလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, ငါထင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကွန်ကရစ်တံတားပိတ်သောကျောက်တံတားစေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ နယူး ...
Izmit မြို့တော်ဝန် Dogan လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် YHT မျှော်ခဲ့ 11 / 12 / 2012 အဆိုပါ Izmit မြို့တော်ဝန် Dogan YHT လေ့လာမှုမှာကြည့်ပါ Izmit မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာခဲ့သည် သမ္မတနိုင်ငံရပ်ကွက်အတွင်းမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအတွက်ဆက်လက်သူကို Nevzat Dogan, (YHT) အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းများကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည်အတူတကွသဘောသဘာဝ၏လုပျငနျးကျော်သွား၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူတွေကတော့ရွာတွေကို Mustafa Yaman သူလည်းနိုင်ငံသားများနှင့်အတူ chatted ။ သမ္မတနိုင်ငံနေထိုင်သူများနှောင်းပိုင်းညအချိန်တွင်သည်အထိအလုပ်လုပ်မယ့် "သူတို့ကသဘာဝလေ့လာမှု၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေကြားသောမျက်ဒေါသထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုအနှောင့်အယှက်, "သူတို့ကဆိုသည်။ Dogan သူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမည်ဟုဆိုသည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ www.haberx.co
Izmit မြို့တော်ဝန် Dogan လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် YHT မျှော်ခဲ့ 25 / 01 / 2013 Izmit မြို့တော်ဝန် Dogan YHT Izmit မြို့တော်ဝန် Nevzat Dogan ၏လုပ်ငန်းခွင်ကိုကြည့်ပါ, အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း (YHT) သမ္မတနိုင်ငံရပ်ကွက်အတွင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အလုပ်İzmitမြူနီစီပယ်၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်ရှိမရှိသတိပြုတစ်ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရာ Dogan, ဒေသတွင်း YHT စီမံကိန်းတွင်သမိုင်းကိုဖန်ဆင်းကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသောလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေ့လာမှု Dogan ပြောနေကြပါတယ်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်သည့်အသက်ရှင်သောဧရိယာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပြည့်စုံစီမံကိန်းအား၎င်းတို့၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌နိုင်ငံသားများ၏အချို့အခက်အခဲများသူတို့နထေိုငျသောသူအချို့အခက်အခဲများတွေ့ဝေဖန်မှုများဖြောင့်မတ်ကဆိုသည်။ နှေးကွေးဖြစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ရန်İzmitမြူနီစီပယ်ရဲ့တာဝန်အတွက်အလုပ်သို့မဟုတ်မ၏သဘောသဘာဝ ...
IMM ကိုသမ္မတ Uysal, လုပ်နေဆဲစီမံကိန်းများ Kagithane မျှော်ခဲ့ 23 / 01 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mevlut Kagithane အဆင့်ဓားအတွက်ရရှိနိုင်ယဉ်နှင့်အသစ်စာသင်စီမံကိန်းများအကဲဖြတ်ဖို့မြို့တော်ဝန်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal နဲ့သူ့အဖွဲ့ Kagithane အတွက်ရရှိနိုင် Nurtepe Eyup မြူနီစီပယ်လူမှု်ဆောင်မှုများထံသို့ လာ. သစ်ကိုစာသင်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. ထင်မြင်ချက်များဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ မြူနီစီပယ်အလုပ်အကြောင်းကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန် Mevlut Uysal ဧရိယာ, ဒါ Eyup မြို့တော်ဝန်အဆင့်ဓားအလုပ်လုပ်နှင့်အဖွဲ့သည်ချီးကျူးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Uysal ကျောက်ခေတ်-Kagithane- Mahmutbey မက်ထရို, Gayrettepe-3 ။ Cendere ချိုင့်က Metro လေဆိပ်နှင့်စည်းမျဉ်း Project မှကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 2019 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ပြီးစီးရန် ...
ATO ဥက္ကဋ္ဌ, ထိုဇာတိမျှော် Bozanka Metro Tools များခဲ့ 01 / 02 / 2018 မက်ထရိုယာဉ်များစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတူရကီကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ATO) ဥက္ကဋ္ဌ Gursel လျဘာ, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု ATO အဖွဲ့ဝင်များစတင် Bozankaya, ကျန်းအတွက်စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထိုဒေသတွင်ခန့်က Metro tools တွေကိုလျဘာသတင်းအချက်အလက် "တူရကီအတွက်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သောမြေအောက်ရထားကားတစ်စီးနှင့်ကျွန်တော်အတွက်စေ့စပ်အဆိုပါ ATO ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ဂုဏ်ယူနေကြတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ သူ၏ခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအပေါ်လျဘာ, အ ATO လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Mustafa Deryal, ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Selahattin Karaoğlanသမ္မတ Musa Pireci နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်ရေးဟာနှင့်အထူးကော်မရှင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး, ဒုတိယသမ္မတ Mehmet ကွန်ဒိုနှင့်ကောင်စီဝင်နောဧကို Acer ကဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ATO ဥက္ကဋ္ဌ ...
အဆိုပါလမ်းမကြီးအလုပ်လုပ်မှာ Kartepe မြို့တော်ဝန်Üzülmezမျှော် 24 / 05 / 2014 Kartepe မြို့တော်ဝန်Hüseyinမစိုးရိမ်, လမ်းတိုးတက်မှုအောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်သည့်ကတ္တရာ patch ကိုအလုပ်ကျော်ကြည့်ရှုအားပေး: အ Kartepe မြို့တော်ဝန်Üzülmezလမ်းမကြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာကြည့်ပါ။ အသွားအလာအမိန့်များနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်း၏အဓိကသွေးလွှတ်ကြောအတွင်း Kartepe သေချာစေရန်အလို့ငှာထွက်သယ်ဆောင်လမ်းတိုးတက်မှုတစ်ခုမှတ်တိုင်အဖြစ်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက် flat patch ကိုအဆိုပါကတ္တရာမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အနီးကပ် Kartepe မြို့တော်ဝန်ဟူစိန်လည်း3ရက်ကြာအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းလယ်ပြင်လေ့လာမှုတွေစဉ်အတွင်းလေ့လာခဲ့သည်မစိုးရိမ်ပါအတိုင်းလိုက်နာလုပ်ဆောင်နေ။ သူအများတို့သည်လေ့လာမှုမှာရောက်ရှိအမှတ်ကျော် Maltepe ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ကတ္တရာ၏စည်းမျဉ်းသူ့ဟာသူ patch ကိုဆန်းစစ်လေ့လာနေသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေသတင်းအချက်အလက်ကသမ္မတတိုးတက်မှုမစိုးရိမ်ပါဘူးသူရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်မြေယာနှင့်လမ်းများအလုပ်လုပ် ...
BTS သမ္မတ, ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သတိပေးရထားမတော်တဆ 11 / 07 / 2018 ကလူTekirdağအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံး 24 ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများ '' ပြည်ထောင်စုဥက္ကဋ္ဌ Hasan Bektas မူတည်. ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအလုပ်သမားသမဂ္ဂ (KESK) ၏အဖွဲ့ချုပ်, ရထားဘေးအန္တရာယ်နှင့်အတူဒေသသို့သွားကြ၏။ ဘေးဥပဒ် Bektas ၏အကြောင်းရင်းများကိုရည်မှတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်သတိပေးချက်များ said: မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမတော်တဆမှု၏နေ့ရှိပါသည်။ သို့သော်တဦးတည်းအရာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးပိတ်ဆို့ရှိပါသည်။ ဒါဟာရေလွှမ်းမိုးအောက်ရှိ culvert ဖြတ်သန်းဘူး။ ရေကြီးမှုကျနော်တို့ရထားလမ်းပြီးဆွဲအောက်မှာလှေငြိမ်ကျောက်ခဲတို့ကိုခေါ်ပါ။ ရွှေကရထားလမ်းအားဖြင့်လေထဲတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီမှာလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းလှည်းပြီးနောက်ကျသွားကြသည်။ အတိတ်ကာလများတွင် -Demiryol '' လမ်းအစောင့်အထိန်း '' ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို '' လမ်းအုပ်ထိန်းသူ '' ...
စွန်ငှက် Bafra မြို့တော်ဝန်ဟာ Interlocking ကျောက်ခေတ်ကြမ်းခင်းစက်ရုံ Visited 11 / 03 / 2015 Bafra မြို့တော်ဝန်က Parker Hawk ရဟတ်ယာဉ်စက်ရုံကျောက်ခေတ်မျှော်သော့ခတ်ခဲ့သည်: လမ်းအလုပ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကြောင့်ကတ္တရာ patch ကိုအလုပ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဧဒုံမြစ်မှာရပ်ကွက်အတွင်းမှ Gazipasa ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်။ Bafra မြို့တော်ဝန်စိတ်ထဲ Sahin, ကြောကျခငျးကျောက်ခေတ်နှင့်စက်ရုံ site ကိုလာရောက်လည်ပတ်နေဖြင့်ကြည့်ရှုအားပေးအလုပ်အတွက်ထုတ်လုပ်မှု်ဆောင်မှုများ, တားဆီးရန်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဒုတိယမြို့တော်ဝန်Çamaş '' ဟူစိန်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Sahin ကိုလည်းရပ်ကွက်အတွင်းKızılırmakဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအဆိုပါကတ္တရာ patch ကိုအလုပ်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ လမ်းအလုပ်အတွက်ကြောင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှဆိုးရွားသောအရာတို့ကိုကတ္တရာ patch ကိုအလုပ်အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ ဧဒုံမြစ်မှာရပ်ကွက်အတွင်းမှ Gazipasa ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်။ စေ ...
Aksaray မြေအောက် Market က
Haliçက Metro တံတား
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 23 1919 Anatolian မီးရထား
အီရန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်, ကာဇက်စတန်နှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်အဆိုပါမီးရထားဧရိယာများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေး
အဘယ်မှာရှိဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ Varsak နိုင်ငံသားများဓါတ်ရထား Stop ၌ထိုင်ပါ!
Kestel Bursa Bursaray နဲ့ခရိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်
Izmit မြို့တော်ဝန် Dogan လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် YHT မျှော်ခဲ့
IMM ကိုသမ္မတ Uysal, လုပ်နေဆဲစီမံကိန်းများ Kagithane မျှော်ခဲ့
အဆိုပါလမ်းမကြီးအလုပ်လုပ်မှာ Kartepe မြို့တော်ဝန်Üzülmezမျှော်
BTS သမ္မတ, ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သတိပေးရထားမတော်တဆ
စွန်ငှက် Bafra မြို့တော်ဝန်ဟာ Interlocking ကျောက်ခေတ်ကြမ်းခင်းစက်ရုံ Visited
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (340) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)